Samsung Gear 360 na-egosi na ihe omume Samsung | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Gear 360 na-egosi na ihe omume Samsung
Onye ọ bụla tụrụ anya na a ga-ewepụta Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ a n'ihe omume n'ehihie a, ihe mezuru ma ọ nweghị onye tụrụ anya ma ọ bụ mmadụ ole na ole tụrụ anya na a ga-eweta ngwaọrụ ndị ọzọ. Na nke a anyị na-ekwu maka nke ọhụrụ Samsung Gear 360 ma ọ bụ Samsung Gear 360 (2016), igwefoto nke ga - edekọ na 360, tinyere azụ nke onye na - ebu igwefoto.
Igwefoto ọhụrụ Samsung ga - enyere gị aka ịmepụta ma dekọọ ọdịnaya nke enwere ike imepụta site na ụdị Samsung smartphone kachasị ọhụrụ, ụdị dị ike nke ga-ahazi ihe ị mepụtara na sekọnd. A ga-eme nke a site na oghere abụọ na azụ na n'ihu ngwaọrụ ahụ. Anya abụọ ahụ ga-ekwe dekọọ vidiyo nke ogo 180 ọ bụla, na ihe njikọ nke kamera abụọ ahụ ga - eme ka onye ọrụ ọ bụla nwee ike ịmepụta vidiyo 360º.
Samsung Gear 360 ga-enwe ike idekọ vidiyo na mkpebi 4K
Anya m nke Samsung Gear 360 ọhụrụ ga-enwe ike ịse foto na mgbakwunye vidiyo, foto ndị a ga-eru 30 Mpx nwere mkpebi nke pikselụ 3.820 x 1.920. Mana ihe kachasị mma na ngwaọrụ a bụ na ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịkekọrịta ọdịnaya ozugbo na Samsung Galaxy S7 ma ọ bụ Samsung Gear iko anyị mana anyị nwekwara ike kekọrịta na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ nyiwe ndị ọzọ dị ka Youtube 360, Milk VR ma ọ bụ Google Street View.
Ihe ndị ọrụ ga-amasị ọtụtụ, ọkachasị ndị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ihe banyere njikọta, Samsung Gear 360 adịghị ada ada. Enwere ike ijikọ igwefoto ọhụrụ site na ama site na Bluetooth, WiFi, NFC na n'ezie, eriri USB 2.0.
Mana n'agbanyeghị ihe a niile, ọnụahịa ahụ agaghị adị ọnụ, ọ dịkarịa ala maka ndị na-ezube ịzụta ya dị ka igwefoto ndị China. Samsung Gear 360 (2016) ga - aga ahịa na August 19, yana ngwaọrụ Samsung ndị ọzọ, inwe a ga-akwụ $ 349. Igwefoto Samsung ọhụrụ ahụ ga-efu ihe dị ka euro 300, ọnụahịa dị oke elu ma ọ bụrụ na anyị atụlee azịza ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ọ gaghị enwe otu nguzogide ahụ ma ọ bụ otu ọsọ ahụ Samsung Gear 360. Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Camcorders » Samsung Gear 360 na-egosi na ihe omume Samsung
Samsung Galaxy Note 7 bụ eziokwu ... mere ukara